သွားနှင့်ခံတွင်းကိုသန့်စင်သောမီးစက်ရုံ | China Dental Curing Light ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
1. 1second curing လုပ်ပါ
2. 3working mode ကို
3. 10W အားကောင်းသောပါဝါ LED မီးလုံး
4. အလင်းအား 2000mw/cm²ထက်ပိုသည်
5. အားအပြည့်ဖြည့်သွင်းရာတွင်အကြိမ် ၂၀၀ ကျော်သုံးနိုင်သည်
10W ပါဝါအပြာရောင် LED Light Curing သွားဘက်ဆိုင်ရာသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောအလင်းတစ်စက္ကန့် Led Curing Light
၅။ အားအပြည့်ဖြည့်သွင်းပြီး tim 200 ကျော်သုံးပါes
သွားဘက်ဆိုင်ရာအားကောင်းသည့်အမြန်နှုန်း LED Curing Lamp အရည်အသွေး Woodpecker Dental Curing Light
အရောင် ၅ ရောင် (ငွေ၊ ရွှေ၊ လိမ္မော်၊ အပြာ၊ အနက်)
2. အလုပ်လုပ်မော်ဒယ်: အားကောင်းတဲ့
4. ၁၀ စက္ကန့်တိုင်းကိုအားအပြည့်သွင်းရန်အကြိမ် ၅၀၀ ကျော်ဆက်တိုက်သုံးနိုင်သည်
Rainbow Dental Curing Light အစွမ်းထက် Wireless Light Cure Machine သွားဘက်ဆိုင်ရာသုံး Led Curing Light
Rechargeable Dental Light Curing Unit သွားဘက်ဆိုင်ရာလက်ကားစျေးနှုန်း LED curing light
သွားပိုးစားခြင်း Caries Detectioning Light အတွက် Caries Detectioning Lighting Dent Caries Detector တီထွင်ဆန်းသစ်မှု
1. Wireless အမျိုးအစားအဆင့်မြင့်မီးချောင်းအလင်း
၂။ ပေါ့ပါးပြီးရိုးရှင်း၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်
၃။ သွားများအားစစ်ဆေးခြင်း၊ လျင်မြန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်နာကျင်ခြင်းမရှိစေရန်ထိရောက်သောလုပ်ဆောင်ချက်
4. ကြီးမားသောစွမ်းရည်မီလီသီယမ်ဘက်ထရီ၊ ဖြုတ်တပ်။ အားပြန်သွင်းနိုင်သည်
၅။ တစ်ကြိမ်အားသွင်းရုံဖြင့် ၈၀ မိနစ်ဆက်တိုက်သုံးပါ
၆။ မီနီသွယ်သွယ် mainframe ဒီဇိုင်း၊ အကောင်းဆုံးကုသမှုပေးစွမ်းသည်
7. အမျိုးအစားနှစ်ခု optic အမျှင်များ
၈။ အလင်းရောင်လှံတံကိုအပူချိန် ၁၃၅ ℃ (၂၇၄ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်) အထိပိုးသတ်နိုင်ပါသည်။
သွားဘက်ဆိုင်ရာ Caries အလင်း G2EE အိတ်ဆောင်သွားဘက်ဆိုင်ရာစံ Caries Detector LED သွားဘက်ဆိုင်ရာကုသမှု
၂။ ကြိုးမဲ့လုပ်ဆောင်မှု၊ အသုံးပြုမှုပေါ့ပါးခြင်း၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း
၃။ လူနာအားကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာ၊ အနည်းဆုံးထိုးဖောက်ခွဲစိတ်မှုကိုပံ့ပိုးပါ
၄။ အသေးစားသေးသွယ်သော mainframe ဒီဇိုင်းကိုအကောင်းဆုံးကုသမှုပေးသည်
၅။ ရိုးရှင်း။ ပေါ့ပါးသော optic fibre ၂ မျိုး၊
၇။ အလင်းရောင်လှံတံကိုအပူချိန် ၁၃၅ ℃ (၂၇၄ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်) အထိပိုးသတ်နိုင်သည်။
သွားဘက်ဆိုင်ရာသွားပိုးမွှားအာရုံခံကိရိယာသည်အလင်းကိုထောက်လှမ်းပေးသောသွားပိုးမွှားများကိုသယ်ဆောင်ပေးသောသွားဘက်ဆိုင်ရာ standard caries အလင်းကိုထောက်လှမ်းပေးသည်
အကျဉ်းချုပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များမူရင်း၊ နေရာ၊ တရုတ်၊ တရုတ်မော်ဒယ်နံပါတ်: သွားပိုးစားရောဂါရှာဖွေကိရိယာပါဝါအရင်းအမြစ်၊ လျှပ်စစ်အာမခံ ၁ နှစ်ရောင်းချမှု ၀ န်ဆောင်မှု၊ အွန်လိုင်းနည်းပညာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းများ၊ သံ၊ ပလပ်စတစ်၊ သံမဏိ၊ သံမဏိ၊ နှစ်အလိုက်အရည်အသွေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: ce တူရိယာအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း: အတန်းအစား II, အတန်းအစား II ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံ: EN 149 -2001+A1-2009 ကုန်ပစ္စည်းအမည်: သွားပိုးစားရောဂါရှာဖွေကိရိယာအဒပ်ဗို့: AV100-240V,5...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသံမဏိသွားဘက်ဆိုင်ရာပိုးမွှားများသည်အလင်းသွားဘက်ဆိုင်ရာ optic ဖိုင်ဘာ caries detector သွားဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်
သွားဘက်ဆိုင်ရာပိုးမွှားခံတွင်း LED ထောက်လှမ်းခြင်းဖြုတ်တပ်နိုင်သောဓာတ်ခွဲခန်းသုံးဓာတ်ခဲများဖြင့်အလင်းကိုထောက်လှမ်းခြင်း
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များမူရင်းဇယား၊ တရုတ်၊ တရုတ်မော်ဒယ်နံပါတ်: သွားပိုးစားရောဂါရှာဖွေစက်ပါဝါအရင်းအမြစ်: လျှပ်စစ်အာမခံ ၁ နှစ်ရောင်း ၀ ယ်မှုဝန်ဆောင်မှု။ အွန်လိုင်းနည်းပညာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်း: သတ္တု၊ ပလပ်စတစ်၊ သံမဏိ၊ သံမဏိ၊ သံမဏိသံမဏိ
သွားဘက်ဆိုင်ရာ LED curing light caries detector dental optic fiber detector detachable battery dental caries detector
detachable ဘက်ထရီနှင့်အတူသွားဘက်ဆိုင်ရာ caries detector သည်သွားကိုထောက်လှမ်းနိုင်သောအရည်အသွေးမြင့် caries detector